Habeenkii Madoobaa Ee Guardiola Ku Bahdilay Mourinho 400 Milyan Oo Daawadeyaal Ah Hortooda
HomeWararka MaantaHabeenkii Madoobaa Ee Guardiola Ku Bahdilay Mourinho 400 Milyan Oo Daawadeyaal Ah Hortooda
08/09/2016 Abdiwahab Ahmed
Markii ugu horreysay ee Jose Mourinho uu tago Nou Camp isagoo hoggaaminaya Real Madrid oo ay colaad wey ka dhaxayso reer Catalonia, natiijo aan la filaynin ayaana uu kala kulmay oo ahayd 5-0, iyadoo ay ciyaartaas la socdeen in ka badan 400 milyan oo dunida dacalladeeda kala joogay.
Iyadoo sabtida la isku diyaarinayo ciyaartoodii u horreysay ee ay isaga hor imanayaan iyagoo wata laba kooxood oo Ingiriis ah, waxa dib loogu noqday kulankaas hore oo ay ka soo wareegtay lix sannadood.
Xavi Hernandez oo la weydiiiyey kulankaas iyo muhiimaddii uu lahaa, ayaa sheegay in ay ahayd ciyaartii ugu fiicnayd ee waligii uu ciyaaro.
“5-0 waxay ahayd ciyaartii ugu wanaagsanayd ee aan abid ciyaaro. Waxa jiray ciyaaro kale oo muhiim ah sida finalka koobka adduunka, laakiin dareenka iyo xamaasadda ay lahayd ciyaartaasi lama qiyaasi karayn.” Sidaas ayuu yidhi.
Ciyaartu waxay dhacday wakhti ay ixitraam badan u muujinayeen ciyaartoyga Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso iyo Alvaro Arbeloa ciiyaartoyga ay xulka u wada ciyaaraan eee Xavi iyo David Silva, laakiin haddana xamaasadda iyo xagxagashadu meesha kamay maqnayn.
Qaybta hore, waxa Barcelona laba gool u kala dhaliyey Xavi iyo Pedro, qaybta dambena waxa mid saddexaad u raaciyey David Silva oo mid afraadna ku daray, kaddib waxa kaadhka cas loo taagay Sergio Ramos oo khalad ku galay Carles Puyol. Kaddib waxay Barcelona heshay goolka shanaad.
David Villa oo hadda u ciyaara naadiga New York City FC ee ka dhisan waddanka Maraykanka, ayaa oo la weydiiyey sida uu u xasuusto ciyaartaas, ayaa waxa uu tibaaxay in ay ahayd habeen aad u wanaagsan, xamaasadda iyo dareenka kacsanna ay beddeshay naftiisa.
Haddaba, Sabtida ayaa la ballansan yahay, waxa ay labada kooxood ee Manchester United oo uu tababare u yahay Jose Mourinho iyo Manchester City oo uu wato Pep Guardiola ay ku kulmi doonaan Old Trafford. Wixii tegay ee ay soo kala mareen labadan tabababare taariikhda ayey ku qoran yihiin, natiijada kulankan ka soo baxdaana waxay cusboonaysiin doontaa bogga taariikhda ay ku leeyihiin ee daboolku yara fuuulay, beryahanna aan aadka loo hadal-qaadin.
Shabakadda ciyaaraha ee www.cadalool.com oo si toos ah u tebin doonta ciyaartaas maalinta Sabtida, ayaa waxa sidoo kale ay soo bandhigi doontaa warbixinaha iyo wararka la xidhiidha labada kooxood wakhtiga ka horreeya ciyaarta.
Liverpool Oo Markii Ay Ku Adkaatay Helista Mohamed Salah U Dhaqaaqday Weeraryahanka Gelson Martins
07/06/2017 Abdiwahab Ahmed
Barcelona Oo Gaadhay Waddanka Japan
14/12/2015 Abdiwahab Ahmed
2 Gool oo uu Martial dhaliyey oo ka caawiyey United inay Karbaashto Southamton